Trump oo Masar ufasaxay inay qarxiso biyo xireenka Itoobiya | Wardoon
Home Somali News Trump oo Masar ufasaxay inay qarxiso biyo xireenka Itoobiya
Trump oo Masar ufasaxay inay qarxiso biyo xireenka Itoobiya
Madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegay hadal guux badan ka kicyay gudaha waddanka Itoobiya. Trump ayaa tilmaamay in Masar ay burburin karto biyo-xireenka wayn ee ay Itoobiya ka dhinac dhisayso Webiga Nile.
Trump ayaa hadalkaasi ka sheegay shir dhinaca taleefanka ah oo ay heshiiska diblumaasiyadeed ku gaarayeen dalalka Suudaan iyo Israa’iil, markaas oo ay khadka ku jireen madaxda labadaasi dal.
Madaxweyne Trump ayaa weriyayaasha Aqalka Cad waxa uu ugu sheegay “Waa xaalad aad u halis badan sababtoo ah Masar sidaas ugama samri karto arrinta.”
“Ugu dambayntii biyo-xireenkaas way burburin doonaan. Waan iri kor ayaanan u leeyahay – biyo-xireenkaas way burburin doonaan. Waana inay wax sameeyaan,” ayuu sii raaciyay Trump.
Madaxweyne Trump intaas kuma uusan ekaan ee waxa kale oo uu tilmaamay in Masar ay arrintaasi ka seexatay: “Waa hore in uusan bilaaban ayey aheyd inay joojiyaan,” ayuu yiri.
Illaa hadda wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Itoobiya ma uu jiro, hasayeeshee ra’iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, Hailemariam Dessalegn, ayaa si caro leh arrintaas uga falceliyay.
Dessalegn ayaa farriin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in hadalka Trump uu u sheegay ra’iisul wasaaraha Suudaan uu yahay mid aan loo meel dayin.
Waxa uu intaasi ku daray inuu ka daray inuu ka xun yahay inuu yiraahdo hasayeeshee ay dhabta tahay in ninkaasi [Trump] uusan ogayn waxa uu ku hadlayo.
Dowladda iyo dadka Itoobiyaba waligood laguma handadin bayaan aanay mas’uuliyad ku dheehnayn oo noocaasi oo kale ah. Taariikhdaa macallin inoo ah.
Horraantii bishii Sibteembar ayey aheyd markii dowladda Mareykanka ay ku dhawaaqday inay dhaqaalaha gargaarka ah ka jari doonto Itoobiya, arrin salka ku haysa biyo-xireenka ballaaran ee uu dalkaas ka dhinac dhisayo Webiga Nile.
Arrintaas ayaa waxaa sabab u ahaa tallaabada ay Itoobiya ku buuxinayso biyo-xireenkan wayn ka hor inta aanay wax heshiis ah la gaarin dalalka Masar iyo Suudaan.
Dowladda Masar ayaa muddo dheer waxa ay ka soo horjeedday in webiga Nile laga dhinac dhiso waxkasta oo yarayn kara biyaha ay hesho.
Itoobiya ayaa iyana sheegaysa inay biyo-xireenkan u doonayso inay hesho koronto la isku halayn karo.
Markii si buuxdo loo howlgaliyo biyo-xireenkaas, waxa uu noqon doonaa biyo-xireenka ugu wayn ee Afrika ee koronto lagu dhaliyo, iyadoo ay koronto heli doonaan 65 milyan oo qof oo Itoobiyaan ah.
Masar, Suudan iyo Itoobiya ayaa muddo sanado ah waxa ay lahaayeen wadahadallo ay doonayeen inay uga heshiiyaan qaabka iyo habka ugu habboon ee si nabad ah xal looga gaari karo ammaanka biyaha Webiga Nile.
Previous articleTrump oo Sudan ka saarey Liiska Wadamada Argagixisada Taageera
Next articleMuqdisho Waddo lix sano xirneyd oo dib loo furay maanta + Sawirro
DAAWO:-Xukun dil ah oo lagu riday Shan nin oo kufsi ka...
DAAWO:- Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo kahadlay dagaalkii maanta ka dhacay...